एक्सनमा नेपाली सेना: भारतले क’ब्जा गरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा खटिन तयार छौँ ! भिडियो हेर्नुहोस – Sandes Post
मुख्य पृष्ठ /News/एक्सनमा नेपाली सेना: भारतले क’ब्जा गरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा खटिन तयार छौँ ! भिडियो हेर्नुहोस
एक्सनमा नेपाली सेना: भारतले क’ब्जा गरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा खटिन तयार छौँ ! भिडियो तलको समाचारको अन्त्यमा राखिएको छ ।
काठमाडौं, जेठ ६ । हालसम्म को रोना सं क्रमित नदेखिएको कर्णाली प्रदेशमा सोमबार पहिलोपटक एक जनामा सं क्रमण पुष्टि भएको छ । योसहित नेपालमा सं क्रमितको संख्या भने ३७५ पुगेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशका दैलेख, आठबीस नगरपालिकाका ३५ वर्षीय पुरुषमा को रोना पो जिटिभ पाइएको हो ।
ल कडाउनको अवधिमा महेन्द्रनगर हुदै ३५ दिनअघि भारतको आग्राबाट आएका ती व्यक्तिको स्वाबको नमुना सोमबार सुर्खेतमा परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको हो । कर्णाली प्रदेशमै पहिलो परीक्षण पो जेटिभ देखेपछि पुनः परीक्षणको लागि सोमबारै नेपालगन्ज पठाइएकोमा त्यहाँ पनि पोजेटिभ देखिएको थियो । क्वारेन्टाइनमा रहेका उनलाई उपचारको लागि दैलेख अस्पताल लगिँदै छ ।
प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार सोमबारसम्म कर्णालीमा २ हजार ७ सय ८९ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ । कर्णालीका १० वटै जिल्लामा करिव ७ सय ७ जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन् । सोमबरा राति स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार नयाँ थपिएका कोरोना सं क्रमितमा धनुषाका २ पुरुष, खोटाङ हलेसीका १ पुरुष, बाँके नरैनापुरका १२ पुरुष, दैलेख आठबीसकोटका १ पुरुष, सुनसरीका १ पुरुष र झापाका १ पुरुष रहेका छन् ।